पेप्सीकोलाको एकै परिवारका ३ जनालाई कोरोना आशंका, पाटन अस्पतालमा भर्ना - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । काठमाडौंको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बसोबास गरिरहेका ३ जनामा कोरोना भारइस(कोभिड-१९) पोजिटिभ देखिएको छ। र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी)बाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपश्चात उनीहरूलाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आरडिटी टेष्टमा पोजिटिभ आएका ३ जनालाई पाटन अस्पतालमा लगिएको र पिसिआर जाँचका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पाएको बताए ।
पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले पनि आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा राखेको र पिसिआरका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । यतिखेर अपार्टमेन्ट परिसरमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।
यसअघि नेपालमा १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सोमबार मात्र कैलाली र रौतहटका एक-एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने आइतबार वीरगञ्जका ३ जनामा यो भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
यसअघि नै ९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। नेपालमा संक्रमित भेटिएका एक जना भने उपचारपछि निको भइरसकेका छन् ।